Nchịkọta WordPress na-agba ọsọ? Gaa na Ijikwa Bochum | Martech Zone
Agbanyeghi na otutu otutu ihe kpatara na ntinye WordPress gi na agba oso (dika ihe edere ede na ederede), ekwenyere m na otu ihe kacha eme ka ndi mmadu nwee nsogbu bu nke ulo oru ha. Ihe ọzọ dị mkpa maka bọtịnụ mmekọrịta na njikọta na - eme ka okwu ahụ sie ike - ọtụtụ n'ime ha na - agbakwa nwayọ nwayọ.
Ndị mmadụ na-achọpụta. Ndị na-ege gị ntị mara. Ha anaghị atụgharị. Inwe peeji nke na-ewe ogologo oge karịa sekọnd 2 ibu ibu nwere ike ime ka ọnụ ọgụgụ ndị ọbịa gbasaa na saịtị ma ọ bụ njọ cart ịzụ ahịa gị. Maka nke ahụ, ọ dị mkpa ka ị rụọ ọrụ iji meziwanye ọsọ gị.
Maka WordPress, anyị akwagala Flywheel ma nwee nsonaazụ dị egwu. Ebe nrụọrụ anyị na-agbago elu 99.9% ma ọ bụ karịa (na mgbe ọ bụghị, ọ na-abụkarị anyị na-arụ ọrụ na ya). Ha nwere akụrụngwa niile dị mkpa na usoro nhazi iji mee ka ijikwa saịtị gị - ma ọ bụ saịtị ndị ahịa gị niile - ọ dị mfe karị:
1-Pịa Weghachi - Ozugbo na weghachite na mfe Snapshot Backups.
Atụmatụ lọ Ọrụ - Ikike ijikwa ndị ahịa n'ime akaụntụ ndị ahịa
Ihe nbipute - Chekwaa isiokwu saịtị na plugins dị ka nhazi ọdịnala ị nwere ike iji wuo ọrụ ndị ga-eme n'ọdịnihu.
Caching - Caching technology maka oke scalability na ọsọ.
CDN Jikere - Blazingly ngwa ngwa ibu ugboro n'ihi na static ọdịnaya.
Cloning - Ike mmepụta oyiri saịtị.
Ndabere kwa ụbọchị - Akpaghị aka, usoro redundant iji kwado ngwa gị dị oke egwu.
Firewall - Otutu, ike firewalls n'etiti gi data na n'èzí egwu.
Igwe nyocha nke Malware - Nchọpụta proactive na mkpochapu malware dị ize ndụ.
nkwado - kediegwu oru nkwado si US dabeere na WordPress ọkachamara.
SSL n'efu - Kwado SSL gafee saịtị gị niile.
Nhazi - Ike iji mmepụta oyiri ma rụọ ọrụ n'ime ebe a na-ekwo ekwo, wee gbanye ndụ.
Gịnị na-ejikwa Bochum Bochum?
Anyị akwagala ndị ahịa 50 Flywheel gafee na-enweghị ihe na-erughị 50 WordPress nrụnye, na ọ gaferela n'enweghị ntụpọ. Na Flywheel bụ a akwadoro onye ọbịa site na WordPress!
Oh, m kwuru na Flywheel nwere ya onwe ya Mbugharị ngwa mgbakwunye?
Isi Ihe Mere Iji Kwaga Flywheel -agụnye:
Nkwado WordPress - Enweghị m ike ịgwa gị oge niile anyị na ndị ọbịa batara ebe ha na-ata WordPress ụta ozugbo na nnabata nke anaghị akwado ya (n'agbanyeghị na ha nwere ntinye 1 pịa). Ikike mbipụta, nsogbu ndabere, nsogbu nsogbu, nsogbu arụmọrụ… aha ya, anyị gbabara n'ime ya na ndị ọbịa ọ bụla boro WordPress ebubo.
Nkwado Agencylọ Ọrụ - ọ bụ nnukwu uru na ndị ahịa nwere akaụntụ ahụ mana anyị agbakwunyere dị ka ndị ọrụ ikike, ndị ọrụ nkwado ikike, yana ndị ọrụ FTP enyere ikike. Ọ bụrụ na onye ahịa ahapụ anyị, ha nwere ike ịnọ Flywheel ma gaa n'ihu na-aga nke ọma. Enwekwaghị ndị na-ejide ndị ahịa ma ọ bụ na-enwe oge Mbugharị na-adịghị mma.
Ego Mgbakwunye - Oge ọ bụla anyị debanyere onye ahịa na Flywheel, anyị jiri ya Flywheel. Anyị na-emeghe na-eme ihe n'eziokwu na anyị na ndị ahịa na anyị na-eme ka a ole na ole ebu anya nke aka… na ebe ọ bụ na anyị anaghị akwụ ụgwọ maka akwaga ha, ha na-emetụta ihe niile.
Cloning - ike iji seamlessly mmepụta oyiri a na saịtị bụ nnọọ kediegwu. Anyị agakwaghị anabata ụlọ oriri na ọagingụ elsewhereụ ebe ọzọ wee wega ya onye ọbịa, Flywheel emeela ha ozugbo. Anyị nwere ike igosi onye ahịa ahụ ọganiihu, ka ha banye ma were ya maka nnwale nnwale, ma kwagide ya ka ọ jiri obere clicks nke bọtịnụ.
backups - Akpaghị aka ma ọ bụ 1-pịa nkwado ndabere na mpaghara mweghachi dị egwu. Anyị nwere onye ahịa nke na-anwale njikọta nke atọ na oge ọ bụla ndị ọzọ kwuru na ha dị njikere ibi ndụ, anyị ga-ebi ndụ ọ dara. Anyị nwere ike weghachite saịtị gara aga n'otu ntabi anya ruo mgbe ha nwetara ntọala ha maka mkpa ahụ.
Performance - caching solid caching na nnukwu netwọọkụ nnyefe ọdịnaya ejirila mee ka ndị ahịa anyị niile na-eme ọfụma. Ebe nrụọrụ dị ọsọ na-eme ka usoro ngbanwe dị mma na ọbụlagodi njin ọchụchọ… ọ bụ akụkụ dị oke egwu nke anyị na-enweghị ichegbu onwe anyị.
WP Cache - na mgbakwunye na igwe nchekwa nke Flywheel, ha na-akwado ya WP Cache na WP Kaiser ngwa mgbakwunye. Ihe mgbakwunye ahụ dị ịtụnanya - site na ike ịdị umengwụ, ntinye, mkpokọta, ndozi nchekwa data, yana ike nchekwa. Ọ bụ ngwa mgbakwunye kwesịrị itinye ego na ya!
Nchekwa WordPress - usoro hacking siri ike nwere ike imebi nsụgharị ochie nke WordPress ma ọ bụ isiokwu ederede na plugins. Flywheel nyochaa gị nsụgharị gị ma hụ na saịtị gị enweghị ike ịta ahụhụ ka anyị na-ahụ ka ndị ahịa ndị ọzọ na-aga n'ihu ịbanye. Kụtuo n’elu osisi, anyị enwetụbeghị okwu. Anyị hụkwara ya n’anya Flywheel ga-eme nkwalite nsụgharị ma ọ bụrụ na enwere ihe egwu egwu.
Nhazi - Flywheel nwere ikike ijiri ike rụọ ọrụ ha nwere ike ịkwalite na saịtị gị ọ bụla, na-enyere gị aka ịmepe saịtị gị gaa na ebe a na-echekwa, melite saịtị ahụ, na ịkwanye ya ka ọ dịrị ndụ mgbe ị dị njikere. Ọ bụ ngwa ọrụ dị egwu nke bụ ihe dịịrị onye ọ bụla chọrọ ịme mmelite dị mkpa na saịtị ha - dịka ịkwalite isiokwu ọhụrụ.
Ọ bụrụ na nke ahụ ezughị, Flywheel mepụtara ngwa nkenye ha nke akpọrọ Obodo. Ngwa ahụ na - enyere ndị mmepe aka:
Mepụta saịtị na mpaghara gị site na iji otu ịpị!
Mee edezi ma gosi onye ahịa gị site na ngosi URL
Kwusara ya Flywheel na ịpị otu pịa ọzọ (ọ na - arụ ọrụ)
Anyị enweela enyemaka nke Flywheel ndị injinia n'ọtụtụ okwu ugbua. Anyị enweela saịtị ndị ezoro ezo na ndị otu ha kpọbatara ndị ọkachamara n'ihe gbasara nchekwa iji chọpụta esemokwu ahụ (ọkachasị ngwa mgbakwunye) ma mezie ya. Anyị enweela saịtị ndị nwere arụmọrụ arụmọrụ na ndị otu ha (na interface) enyerela anyị aka idozi ma dozie. Anyị enweela saịtị ndị were 10 sekọnd iji kwado ndị agha ndị ọzọ na-ebu n'okpuru 2 sekọnd na Flywheel.
Ma ọ bụghị naanị nkwupụta anyị. Anyị esoro ụlọ ọrụ ndị ọzọ ekerịta ihe ịga nke ọma anyị, ha akwagakwala ndị ahịa ha niile Flywheel. Nhọrọ pụrụ iche na WordPress na-ekwe ka ndị ahịa gị zụta atụmatụ ahụ wee tinye otu gị dịka ndị ọrụ enyere ikike. Nke a ga - enyere gị aka ịrịọ nkwado n’aha ha ma jikwaa onye ọrụ na nnweta SFTP - oge niile ndị ahịa nwere akaụntụ ahụ. Nye ndị ahịa gị koodu mgbakwunye gị na Flywheel ga-ọbụna kwụọ gị ụgwọ.
Ihe ndozi arụmọrụ rụpụtara nyere aka belata ọnụego bounce, gbatịa oge na ibe, yana - n'ihi mmelite dị na ibe peeji nke - nyere anyị aka inweta nzipụta njin ọchụchọ dị egwu. Oh… na ee, njikọ ndị a post bụ anyị Mgbakwunye njikọ.
Ndị ọzọ na-enye ndị na-eweta Bochum jikwaa WordPress
Ejiri Bochum Bochum Bochum bu nke enyere otutu WordPress. Enwere ụfọdụ ndị ọzọ mara mma n'otu ụlọ ọrụ ahụ ma anyị ejirila ha niile:
WPEngine - ugbu a nwe Flywheel! WPEngine nwere ụfọdụ akụrụngwa akụrụngwa mana o nwere ụfọdụ atụmatụ pụrụ iche. Otu nke anyị choro maka onye ahịa bụ ikike ibudata faịlụ log na-akpaghị aka maka nnabata.
Kinsta - na - eme ụfọdụ nnukwu ebili mmiri na ụlọ ọrụ maka akụrụngwa ha dị egwu. Ha na-agba ọsọ saịtị dị oke egwu maka ụfọdụ ụdị ama ama.
Tags: ọzọ na wpengineezigbo ụlọ ahịaife efeflywheel obodossl efuumengwụ ibumpaghara wordpress developmentjikwaa WordPress BochumWordPressndabere wordpressWordPress cachingcdn wordpresswordpress nchekwa data njikarịchawordpress mmepeWordPress firewallakwụkwọ ntinye akwụkwọWordPress malwarewordpress sslnhazi isiokwuwordpress nkwadowpcachewetaBochum ntinye
Aug 26, 2011 na 1:14 PM
Achọpụtala m ma nsogbu m n'ozuzu na ụlọ ahịa WordPress ndị a niile bụ na ị ga-ahapụrịrị njikwa nke njikwa anaghị anabata m. Gba ọsọ na ebe nrụọrụ weebụ buru ibu chọrọ ka m nwee njikwa zuru oke n'akụkụ niile - gụnyere plugins na ịnweta nchekwa data. Ihe ngwugwu ha adighi nma n'eziokwu - $ 100 / ọnwa maka nyocha 250k na 100gb? Lee oke aka ike m ga-akụ n'ime izu 2-3. M na - eji Templelọ Mgbasa Ozi ugbu a (ma na - akwụ ụgwọ dị ukwuu maka ya) - na iji ngwa ọrụ ọ bụla 'njikarịcha' (cahcing, CDN, wdg) enwere m enweghị ike ịme oge kachasị mma karịa 9-10 sekọnd. Isi ihe m na-achọ ime bụ na enweghi mgbịrịgba ọlaọcha ma ọ bụrụ na ị nweta WordPress iji gbaa ọsọ. Agbalịrị m ha niile.
Aug 26, 2011 na 5:25 PM
You nwere ike ijikwa akụkụ niile, Jonathan. Ebe nrụọrụ anyị nwere ọtụtụ nhazi na plugins iji mee ka ọ mee ihe niile anyị chọrọ. Ekwenyere m na ịnye ọnụahịa dị mma nke ọma maka nkezi ụlọ ọrụ blog… nkezi onye amaghị otú hazi CDNs na caching ya mere na nke a bụ maa n'okpuru na-eri. BTW: Anyị na-eji Mediatemple yana… na CDN na Cloudflare na ọ naghị arụ ọrụ nke ọma dịka anyị chọrọ.
Sep 14, 2011 na 5:29 PM
You na-akwado saịtị WordPress na sava grid Media Temple ma ọ bụ sava raara onwe ya nye? Enwere m saịtị dị mfe ejiri (mt) rụọ ọrụ maka afọ 2 na ntanetị na oge ibu bụ ihe jọgburu onwe ya, jiri nwayọ nwayọ na mpaghara nchịkwa bụ naanị ihe na-egbu mgbu na ịnyịnya ibu. M kwuru banyere dum ahụmahụ bụ nnọọ jọgburu onwe ya?
Emere m ihe niile enwere ike ime n'okpuru anyanwụ iji bulie saịtị m belụsọ ịzụta ihe grid ma ọ nweghị ihe arụ ọrụ. Kachasị ya na minify, WP Super Cache, wdg. Ọbụna m gbalịrị iji CloudFlare na wp ọbịa ọzọ ma oge ibu bụ ihe ọchị. 20 sekọnd Ibu Ibu ulo?
Ekpebiri m ịkwaga saịtị m na Hostgator na mmụba ọsọ ọsọ ugboro atọ n'abalị. M ka na-atụ uche nchịkwa (mt) nke dị ịtụnanya mana ọsọ nke saịtị m na-eme ka ihu ọma dị mma.
Ugbu a, m na-azụ ahịa maka websaịtị ọhụụ mana ugbu a, m ga-achọ ịwụnye ọtụtụ iji nwee ike ịnabata saịtị 10 micro n'ime ya. Anọ m na-ele anya (mt) raara onwe ya nye, WP Engine na Page.ly. Lọ mgbasa ozi yiri ka ọ dị mma karịa ma ha agbaala m ọkụ na ntanetị, mana m na-eche ma ọ bụrụ na ha raara onwe ha nye ga-enye m mmụba ọsọ m chọrọ na ịdị mfe nke iji ya na njikwa njikwa ha.
Sep 14, 2011 na 7:09 PM
MT bụ naanị "azụmahịa" ma ọ bụrụ na ịchọrọ igwe na-enweghị nkwado ọ bụla maka WordPress. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ime nchedo n'onwe gị, mee onwe gị ọsọ ọsọ, gbasaa onwe gị, CDN n'onwe gị (ma kwụọ ụgwọ ya).
Ma enwerekwa nnweta dị elu. Ma n'ihi ngwanrọ na ngwaike ngwaike, ntinye otu sava enweghị ike ịdị oke-dị ka ụyọkọ.
N'echiche anyị, ịnwa ịchekwa $ 20 / mo mana ịnwe ihe niile ahụ n'onwe gị abụghị iji oge ma ọ bụ ego eme ihe. Ọ dịịrị anyị mfe karịa n ’ihi na anyị weghaara ọnụ ahịa nke ndị ahịa anyị niile; ọ dị nnọọ oke iji nwee ezi uche maka otu saịtị ị ga - eme ma ọ bụrụ na ịnọghị TechCrunch.
Sep 14, 2011 na 7:38 PM
Daalụ Jason. M na-agbapụ ụnụ ụfọdụ ozi site na saịtị gị maka nkwupụta.
Aug 26, 2011 na 6:17 PM
Ndewo Joanathan, m ghọtara ebe ị si abịa, mana ị nwalebeghị ya ma ọ bụrụ na ịnwalebeghị anyị. 🙂
Oke ndị ahụ bụ ihe nduzi - anyị anaghị agbanyụ saịtị gị ma ọ bụ ihe ọ bụla ma ọ bụrụ na ị kụrụ ha, ọ pụtara na ọ ga-efu anyị ihe karịa na ọ ga-efu gị oke. Anyị nwere ike ikwu banyere ya.
Anyị enweela ọtụtụ ndị na - enweghị ike ịkwalite oge ụfọdụ, mana lee anyị ka mma. N'ihi na: http://wpengine.com/our-infrastructure .
Ọzọkwa, anyị * na-eme * na-enye gị njikwa maka plugins, koodu omenala, na ịnweta nchekwa data, yabụ echela na anyị ga-akpọchi gị!
Kama, gịnị ma ị nye anyị ohere… ịkpali otu kọmpụta gị, zigara m email (jason na wpengine) ka anyị hụ ihe anyị nwere ike ime.
Ọkt 9, 2011 na 11:42 PM
9-10 sekọnd adịghị anakwere. Onwe m achọtara m ịgbanwe site na Thesis gaa na Woo Fraịdee mere ka saịtị m nwayọ nwayọ. Anọ m na-eburu na 3 sekọnd ma ugbu a ụzọ ya ji nwayọ.
Achọpụtala m VPS dị nnọọ mma karịa Bochum ekesara ma wepu ọtụtụ saịtị na MT nke bụ gimmick na nsogbu na m chere yana oke oke ọnụ
Nwere ike nweta VPS na cPanel maka $ 35 kwa ọnwa ma dị ọnụ ala maka nchịkọta kwa afọ. Dị ọnụ ala ọzọ maka VPS na Plesk
Ọkt 1, 2012 na 1:52 PM
Ndewo Brad… Ọ bụrụ na ị chọghị m ịrịọ .. olee ebe ị nwetara “VPS na cPanel maka $ 35 kwa ọnwa”
Nke ahụ ọ bụ na MT? Say sị na ị kwagara ọtụtụ saịtị ebe ahụ mana gịnị bụ gimmick ha? Obi ọ̀ na-adị gị ụtọ na ha?
Okwu gi a gbagwojuru m anya.
Aug 26, 2011 na 11: 08 AM
Anonymous, Echere m na ị ga-ahụ ndị folks a dịtụ iche. Nke mbu, ị nwere ohere SFTP ka ị nwee ike ime mgbanwe ị chọrọ na n'akụkụ mgbakwunye. Ebe ị nwere ohere ịnweta faịlụ zuru oke, ị nwere ike ịme ihe ọ bụla masịrị gị na nchekwa data. Mụ onwe m nọkwa na MediaTemple na m na-etinye caching na CDN… mana mụ na gị bụ ụdị adịghị ama ama. Ọ bụrụ na mmadụ anaghị aghọta etu esi ebuli maka ọsọ ọsọ, WP Engine bụ azịza zuru oke ebe ọ bụ na ha na-echegbu onwe ha maka arụmọrụ ya na ịkwesighi. Olu nke page peeji na bandwit karịrị nnọọ ihe nkezi ụlọ ọrụ blogger chọrọ. Ọ bụrụ na ị ga - ewe onye ọrụ iji bulie saịtị gị ma hazie CDN, ọ ga - efu ọtụtụ, karịa.
Aug 26, 2011 na 5:01 PM
Ezi onye nwe gị na ebe nrụọrụ weebụ na-ebu ngwa ngwa.
Aug 26, 2011 na 5:14 PM
Ọ bụghị ma - ma ọ ga-eme!
Aug 26, 2011 na 5:16 PM
N'ezie? Echere m na ị kwagara ọzọ. Ọ bụrụ na ọ bụghị, ị na-eme ezigbo mma na ọsọ dị ka ọ dị.
Aug 26, 2011 na 5:22 PM
Amalitere m iji Cloudflare - lelee ya, ọ bụ ọrụ na - akwụghị ụgwọ ma buru ibu nke sava Bochum anyị na Mediatemple. Ọ bụghị ọsọ kachasị ọsọ, mana mkpokọta ọsọ na-akawanye mma n'ihi ya.
Aug 26, 2011 na 5:50 PM
Egwu. Aga m enyocha ha. Eleezie, ọkacha mmasị m mma nke WPEngine mgbe m lere ya abụghị ọsọ ma ọ bụ nkesa. Ọ bụ 1-pịa staging. Kedu ụtọ na nke ahụ?
Aug 28, 2011 na 1:40 PM
Echere m na ihe ọ bụla metụtara Jason Cohen ga-abụ ọlaedo siri ike. Enweghị m mkpa maka CodeCollaborator ya, ebe ọ bụ otu ndị otu, LOL. Ma, m na-eso ya na-amụ nkà ihe ọmụma ya ihe karịrị afọ abụọ.
Mgbe mbụ o dere banyere WP Engine, ọ masịrị m. N'ezie, ọ na-edegharị ya site n'oge ruo n'oge na ọ bụ otú m si abanye taa.
O di nwute, enwere m ike adighi njikere maka WP Engine, ma, ya mere m gha abanye na CloudFlare.
Sep 14, 2011 na 5:33 PM
Dịka ịgbaso mkparịta ụka a - emechara m gbanwee Bochum maka Anglotopia.net na Wpengine na saịtị m na-agba ọsọ nke ukwuu. Ana m edebe ihe nkesa MT maka saịtị ndị ọzọ ebe oge adịghị abụghị nsogbu mana ugbu a Anglotopia bụ ebe ọ kwesịrị.
Jun 26, 2012 na 4:45 AM
ọ dị oke ọnụ maka otu saịtị. Aga m aga maka VPS anaghị achịkwa. Aga m enwe ngalaba na-akparaghị ókè na sistemụ mkpuchi dị ka xcache.